ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း (၈၄၇)ခုစစ်ဆေးခဲ့ရာ ပိုးအတည်ပြုလူနာသစ်မတွေ့ရ............ | YTV
ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း (၈၄၇)ခုစစ်ဆေးခဲ့ရာ ပိုးအတည်ပြုလူနာသစ်မတွေ့ရ…………
August 1, 2020 39 Viewers
ဇူလိုင်လ(၃၀)ရက်နေ့အတွက် ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း(၈၄၇)ခုကို COVID-19ပိုး ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာမှာ ပိုးအတည်ပြုလူနာသစ်မတွေ့ရဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့ မနက်က ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်......
ရန်ကုန် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနက ပထမသုတ်နဲ့ ဒုတိယအသုတ်အဖြစ် ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း(၃၅၇)ခုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(DMR)က ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း(၁၂၅)ခုတို့ကို စစ်ဆေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မန္တလေး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန နဲ့ မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲနမှုဆိုင်ရာဌာနတို့က ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း (၃၆၅)ခုနဲ့ ရန်ကုန်မြို့က အမှတ်(၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး ခုတင်(၁၀၀၀)က ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း(၂၇၃)ခုတို့ကိုလည်း ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ ပိုးအတည်ပြုလူနာသစ်မတွေ့ခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်......
မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ (၄)လကျော်ကာလမှာ ပိုးကူးစက်ခံသူပေါင်း(၃၅၃)ဦးအထိရှိပါတယ်။ ပိုးကူးစက်ခံရပြီး ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူက (၂၉၅)ယောက်အထိရှိကာ သေဆုံးသူက (၆)ယောက်အထိရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်........
US Open ပြိုင်ပွဲကို ပရိသတ်မပါဘဲ ကျင်းပမယ်လို့ အမေရိကန် ဂေါက်သီးရိုက်အဖွဲ့ချုပ် ထုတ်ပြန်လိုက်……….. Quarantine Centre ဝင်ရောက်နေသော နေရပ်ပြန်ပြည်သူများအား “နမ့်ခုံး” ရှမ်းများပရဟိတအသင်းမှ တစ်ကိုယ်ရေသုံး ပစ္စည်းများဒုတိယအကြိမ်ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့…………..
Studio Live With Yandanar MY
“သားသားမီးမီး တို့ကို Sex Education သင်ပေးပါ” စကားဝိုင်း
Good To Great FOLLOWERSHIP ( U Zaw Myo Hlaing )
Good to Great Followership (U Thurain Nyein)
Studio Live With Key
Cover Star ( Shin Phone )